Ukutya kuka-Osama Hamdiy yindlela elungileyo yokunciphisa umzimba
ezaposwa ngomhla 27.09.2021 27.09.2021
Nabani na okhangela ukuphalaza loo mapawundi ongezelelweyo ujonge iindlela ezahlukeneyo zokutya kunye nemilingo yokulahleka kobunzima. Kodwa ngaphandle komzamo kunye nomonde, akukho nto yenzekayo.
Unjingalwazi onxulumene neHarvard Medical School uOsama Hamdiy, oligqirha eliyintloko kunye nomlawuli weZiko leSwekile leJoslin eliphanda ngempembelelo yendlela yokuphila kwindlela yokwehla kobunzima, uye wakhulisa ukutya kwakhe, enkosi apho abaninzi belahlekelwe ziiponti ngaphandle kwenzakalise impilo yabo.
Imigaqo esisiseko yokutya kuka-Osama Hamdiy
Isiseko sokutya kuka-Osama Hamdiy asikokuncipha kweekhalori zokutya okutyiweyo, kodwa iinkqubo ezenzeka emzimbeni, ezithi emva koko zichithe amafutha amaninzi.
Ewe ukutya okunjalo kuthathwa ngokungqongqo, kuba awungekhe wophule imenyu yokutya okanye ukhethe okhethekileyo. Imenyu icwangciselwe iiveki ezi-4, ngeli xesha unokulahleka ukusuka kwi-5 kuye kwi-30 kg yobunzima obugqithisileyo, emva koko kufuneka utshintshele kwisondlo esifanelekileyo.
Ungalibali ukwenza imithambo yomzimba ngaxeshanye, kuba wonke umntu uyazi ukuba amanzi awahambi phantsi kwelitye elixokayo.
Imigaqo yokutya ka-Osama Hamdiy
Uluhlu lweemveliso ezivunyelweyo:
1. Iziqhamo: iinanapple, iapilkosi, ipesika, iidiliya, itangerine, iapile, ipere, iorenji, iwiwi, ivatala, ivatala, iplum.
2. Imifuno (ibilisiwe kuphela): ii-ertyisi eziluhlaza kunye neembotyi, isitshalo seqanda kunye ne-zucchini, iminqathe kunye ne-zucchini, isikwashi. Kwaye neminye imifuno, ngaphandle kwaleyo ingavumelekanga.
3. Inyama nentlanzi: inyama ngaphandle kwamanqatha, kufuneka iphekwe inkukhu (ibilisiwe okanye yoyiwe) emva kokususa ulusu. Intlanzi okanye i-shrimp, ityhuna ebilisiweyo okanye enkonkxiweyo.
4. Isonka, ingakumbi ukutya okuziinkozo okanye irye.
Uluhlu lweemveliso ezingavumelekanga:
1. Iziqhamo: ibhanana, imango, iidiliya, imihla, amakhiwane.
2. Imifuno: iitapile.
3. Inyama: inyama enamafutha kunye neentlanzi ezinamanqatha, imvana.
Kukho iintlobo ezininzi zemenyu yokutya kwe-Osama Hamdiy, eyilelwe iintsuku ezingama-28 kwaye yahlulwe yaziintsuku ezi-4 ezisixhenxe. Apha ngezantsi kukho enye yazo.
Kubalulekile: iimveliso azinakutshintshwa!
Yintoni ongayityi ekudleni
Isondlo sokuqala seentsuku ezisixhenxe
Isidlo sakusasa siyafana yonke imihla :? Inxalenye yesidiliya
Usuku lokuqala: iziqhamo zohlobo olufanayo.
Usuku lwesibini: inyama, isaladi yemifuno, iidiliya - 1 pc.
Usuku lwesithathu: itshizi emhlophe enamafutha asezantsi, isilayi sesonka, iitumato.
Usuku lwesine: iziqhamo.
Usuku lwesihlanu: amaqanda abilisiweyo - ii-2 iiPC., Imifuno ebisiweyo.
Usuku lwesithandathu: iziqhamo.
Usuku lwesixhenxe: inyama, isaladi okanye imifuno ebilisiweyo, iidiliya - 1 pc.
Umhla wokuqala: inyama engacacanga.
Usuku lwesibini: amaqanda abilisiweyo -2 ii-pcs., Isilayi sesonka se-rye, iidiliya.
Usuku lwesithathu: inyama.
Usuku lwesine: inyama, isaladi eluhlaza yemifuno.
Usuku lwesihlanu: intlanzi ebilisiweyo, isaladi eluhlaza, iidiliya - 1 pc.
Usuku lwesithandathu: inyama.
Usuku lwesixhenxe: imifuno ebilayo.
Isondlo sesibini seentsuku ezisixhenxe zika-Osama Hamdiy:
Usuku lokuqala: amaqanda abilisiweyo - ii-2 iiPC, isaladi eluhlaza.
Usuku lwesibini: inyama okanye intlanzi, iletisi.
Usuku lwesithathu: ngokufanayo nosuku lwesibini.
Usuku lwesine: amaqanda abilisiweyo - ii-2 iiPC, itshizi yeFeta, imifuno etshisiweyo.
Usuku lwesihlanu: intlanzi okanye ukutya kwaselwandle.
Usuku lwesithandathu: inyama, iletisi, iidiliya - 1 pc.
Usuku lwesixhenxe: inyama yenkukhu, isaladi yemifuno, iidiliya - 1 pc.
Okokuqala, okwesibini, usuku lwesithathu: amaqanda abilisiweyo - ii-2 iiPC., Iidiliya - 1 pc.
Okwesine, wesihlanu, umhla wesithandathu: iziqhamo.
Usuku lwesixhenxe: inyama yenkukhu, iitumato, iidiliya -1 pc.
Usuku lwesithathu lwesixhenxe:
Sitya nakweyiphi na ivolumu imini yonke:
Usuku lokuqala: iziqhamo.
Usuku lwesibini: imifuno ebilayo, isaladi yamagqabi.
Usuku lwesithathu: nokuba ziziqhamo okanye imifuno ebilayo.
Usuku lwesine: intlanzi, lettuce.
Usuku lwesihlanu: inyama yenkukhu.
Usuku lwesithandathu: uhlobo olunye lweziqhamo.
Usuku lwesixhenxe: olunye uhlobo lweziqhamo.
Isidlo sesine seentsuku ezisixhenxe zokunciphisa umzimba:
Kuya kufuneka usasaze iimveliso kwimenyu yosuku lonke kwaye utye kakhulu njengoko kubonisiwe kuwo nawuphi na umyalelo.
Usuku lokuqala: inyama yenkukhu - 200 gr., Intlanzi - 200 gr., Iitumato, ukhukhamba, iorenji - 1 pc., Iidiliya - 1 pc.
Usuku lwesibini: isonka esipheleleyo senkozo - izilayi ezi-2, ikhukhamba kunye nesaladi yetumato, nasiphi na isiqhamo - iiPC ezine.
Usuku lwesithathu: isonka esipheleleyo seengqolowa - iziqwenga ezi-2, i-cottage cheese (i-0% yeoyile) - i-100 gr., I-Orenji - ii-2 ii-pcs, iGrapefruit - ii-2 iiPC. , imifuno ebilisiweyo - i-200 gr., iitumato - ii-2 iiPC.
Usuku lwesine: inyama yenkukhu? iinkukhu, isaladi yamakhukhamba - ii-2 iiPC. kunye neetumato - ii-2 ii-ii., Iorenji - 1 ipc., iidiliya - 1 pc.
Usuku lwesihlanu: amaqanda abilisiweyo - ii-2 iiPC., Isaladi yemifuno, iidiliya, i-1 pc.
Usuku lwesithandathu: isonka esipheleleyo senkozo - isilayi e-1, ikhukhamba - i-1 pc., I-Cottage cheese okanye i-feta cheese - i-100 gr., Inyama yenkukhu - 200 gr.
Usuku lwesixhenxe: isonka esipheleleyo sengqolowa-isilayi e-1, iitumato - ii-2 iiPC, intlanzi - i-150 gr, inyama yenkukhu - i-200 gr, i-orenji - 1 ipc., Iidiliya - 1 pc., Imifuno - 200 gr.
Kuyimfuneko ukusela ubuncinci i-2-5 yeelitha zamanzi emini, kuvunyelwe iti kunye nekofu ngaphandle kweswekile. Ungatya endaweni yesonka samasi i-cottage cheese engenamafutha, Kwaye endaweni yesiqhamo seediliya - iorenji. Ubunzima beemveliso abuphelelanga. Kodwa ukwenza umthambo ngokudibeneyo nokutya kuka-Osama Hamdiy kunika iziphumo ezimangalisayo.
Kubalulekile: nakuphi na ukungathotyelwa kokutya kwaye kuya kufuneka uqale kwakhona ukusukela kusuku lokuqala, kwaye uqhagamshelane nogqirha wakho ukuba unezifo ezinganyangekiyo.
Ukutya kweMillet - ukunciphisa umzimba kunye nokomeleza umzimba
Ukutya kweklabishi (thabatha i-24 kg ngenyanga): uphononongo kunye neziphumo (ifoto)
Ukutya Vegan ngokunciphisa umzimba: zokupheka kunye neemenyu ngeveki
Ukutya isuphu - ukunciphisa umzimba kwiintsuku ezisi-7
exhonyiweyo Ubuhle kunye neMpilo
Edlulileyo Malunga nee-strudels, ii-tatenas kunye nokuzaliswa
Okulandelayo Isobho esivuthayo samanqatha - iiresiphi ezininzi ziluncedo ekunciphiseni ubunzima
Imibuzo ye-85 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,807.